လျှော့ပေါ့ဂီတ & အေးစက်နေတဲ့ Jizera | ဧရာမ, ဧရာတောင်တန်း, ခကျြပရဒိသု
Homeသတင္းေၾကျငာခ်က္တောင်များဗီဒီယိုလျှော့ပေါ့ဂီတ & အေးစက်နေတဲ့ Jizera
1.3.2018 by PetrPikora.com
Jizera ဂီတလျှော့ပေါ့ခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားအောက်ပိုင်းSytováမှာ weir မှာအေးခဲ။ အောက်ပိုင်းSytová (ဂျာမန် Nieder-Sittau) ကို Liberec ချက်ဒေသအတွက် Semily ခရိုင်အတွင်းရှိမြို့တော်စည်ပင်ကHáje nad Jizerou ၏အစိတ်အပိုင်းသောရွာဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတောအုပ်နှင့် Meadows ၏အဓိကအားပါဝင်သည်ဟုဒေသတွင်း၌ Jizera ၏ညာဘက်ဘဏ်အပေါ်, အရှေ့မြောက်ဘက်Háje nad Jizerou ၏ 1,5 ကီလိုမီတာအကြောင်းကိုတည်ရှိသည်။ ဒီနေရာတွင်တဦးတည်းလမ်း II ကို / 292 ။ မှတ်ပုံတင်လိပ်စာများရှိပါတယ် 161 ။ အမြဲတမ်းအတွက် 288 မြို့သားတို့ကဒီမှာနေထိုင်ကြသည်။ ရွာ၏ပထမဦးဆုံးစာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားခြင်းအဆိုပါ 1323 ကနေလာပါတယ်။ အသင်းတော်နယ်ပယ်အခြေချ Loukov (Krakow ၏စိန့် Stanislaus များ၏ဘုရားကျောင်းမှာရိုမန်ကက်သလစ်စီရင်စုနယ်) ကပိုင်ဆိုင်သည်။ အောက်ပိုင်းSytováအတွက်ရိုးရာဘုရားဖူးနှစ်စဉ်3ကျင်းပခဲ့တယ်။ သြဂုတ်လတနင်္ဂနွေ။ အဆိုပါရွာ (ရွာအတွင်းကန်နှင့် Loukov နှစ်ခုသည်အခြား SDH ဖြစ်ကြသည်) ကိုလည်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် .Osadu မြစ် Jizera စီးဆင်းရာအောက်မှာPeřimovPeřimovskýတံတားနှင့်အတူချိတ်ဆက် - ကချက်သမ္မတနိုင်ငံပထမဦးဆုံးအားဖြည့်ကွန်ကရစ်တံတားပြန် 1912 မှစတငျရတစျဦးဖွစျသညျ ။ နောက်ထပ်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး။ 1800 နှစ်တွင်တစ်ဝှမ်းမှအနိမ့်Sytováသစ်သား belfry ဖြစ်ပါတယ်။
Jizera (Iser ဂျာမန်, ပိုလန် Izere) ပိုလန်အတွက်နွေဦးနှင့်အတူချက်သမ္မတနိုင်ငံတစ်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Elbe တစ်ဦးလက်ျာဘက်မြစ်လက်တက်သည်။ စီးဆင်းမှု၏အရှည် 164,6 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေဝေရေလဲဧရိယာ 2193,4 စတုရန်းကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမြစ်၏အဆိုအရအမည်ရှိခဲ့ကြသည်ဧရာမတောင်တန်းအဆိုပါစကားလုံးကိုယ်တိုင်ကဖြစ်ကောင်းဆဲလ်တစ်မူရင်းရှေးခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ (ဈ), r, cf. ဆွေမျိုးများရှေးဟောင်းအိန္ဒိယisirás (ချွန်ထက်အစာရှောင်ခြင်း, လတ်ဆတ်သော, အားကြီးသော) - အခြေခံအားဖြင့်sufigovaný, အမြစ်စကားလုံး * is- ဖြစ်ပါတယ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဖြစ်အစောပိုင်း Gizera 1297 အဖြစ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ ဒါဟာJizerskéတောင်ရိုး Smrk အောက်မှာအစပြု, ထို့နောက်အကြောင်းကို 15 ကီလိုမီတာခကျြပိုလန်နယ်စပ်တစ်အရှည်ပါဝငျမဟာဧရာမကျယ်သောအရပ်၌ (သစ်ဆွေး Bog Nature Reserve Jizery) မှတဆင့်စီးဆင်း။ ယခင်ကလက်ျာတစျခုဖွစျသညျယခုသူတို့ကိုအကြားတစ်ဦး slot ကလမ်းညွှန်မှုပြည်နယ်နယ်စပ်နှင့်အဓိကအရင်းအမြစ်အပေါ်တဦးတည်းဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည် Spruce အပေါ်နှစ်ခုစမ်း၏ရသောအကြောင်းကို 1537-1845 အကြားအစဉ်အမြဲနှင့်အလွန်လှသောနယ်စပ်အငြင်းပွားမှုများအပြီး, ဒီအဆင့်ကိုအားလုံး၎င်း၏အထက်နေရာကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ပိုလနျခြမ်း။ ထို့အပြင်နယ်စပ်တလျှောက်စီးဆင်းဧရာမတောင်တန်းထို့နောက်အမျိုးသားဥယျာဉ်သည်ဧရာမတောင်တန်းနှင့်ရွှတ်-kozákovခေါင်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဤအချိန်တစ်လျှောက်လုံးမြစ်ပျော့ပြောင်းပြီး segments များနှင့်အတူသိသိသာသာလျှောစောက်နှင့်ကြောမြစ်ကြမ်းပြင်နှင့်အတူ Turnova နှင့်အခြားဝေမျှဖို့ supercritical ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သေးငယ်လက်ဝဲပခုံးလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် Little က Jizera ဟုခေါ်သည်။ Turnova Jizera မှစ. ဘယ်မှာပိုပြီးအလယ်အလတ်ဆင်ခြေလျှောပွင့်လင်းကျေးလက်, မှတဆင့်ပြေး။ 164 ကီလိုမီတာပြီးနောက်မြစ် (မြစ်ဝကိုယ်တိုင်ကအဆိုပါ cadastral Lazne Tousen, ထိုဘရန်ဒီ nad Labem နှင့်Čelákoviceအတွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်) ကို Labe Káranýmသို့စီးဆင်း။ Jizera, တကရောက်ရေချိုငါးမြစ်ရဲ့အဓိကချောင်းရေကိုဖြစ်ပါသည်လည်းအသုံးပြုမှု boating သိရသည်။ အားလုံးအထက်, က Benatky နှင့် Sojovice အတွက်ရေကုသမှုစက်ရုံထဲကနေရေးဆွဲသောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဆိုပါ Elbe နှင့်အတူရေကုသမှု Jizera အနီး Karan အတွက်စက်ရုံနှင့်၎င်း၏မြစ်ဆုံ, ပရာ့ဂ်ဘို့ရေကိုသောက်သုံးခြင်း၏တဦးတည်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: 4K, djs များအတွက် Mavic, အနိမ့်Sytová, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်, ဂီတ, Jizera, floe, floes, kvadroptéra, ကုထုံး, ရေခဲ, Mavic, muzika, မြစ်, လြှော့ပေါ့ခွငျး, လြှော့ပေါ့ခွငျး, သီချင်း, ရေထိန်း, ရေ
Previous post တံတားများBystrá nad Jizerou Háje nad Jizerou Jizerou ကျော်အေးခဲ
next ကိုဆောင်းပါး စတီဖင်ဟော့ကင်းသေ